Apple Inoburitsa Regedza Mumiriri wewatchOS 7.2 kune Vanogadzira | Ndinobva mac
Apple inoburitsa Regedza Mukwikwidzi vhezheni yeOSOS 7.2 kune vanogadzira
Vhiki imwe mushure mekutanga kweyechitatu beta uye mwedzi mumwe mushure mekutanga kweWatchOS 7.1, Apple nhasi yaburitsa iyo Regedza Candidate vhezheni yeiri kuuya watchOS 7.2 beta vhezheni kune vagadziri vezvinangwa zvekuyedza. Kana iwe uri mugadziri, usamirira kwenguva refu uye tora iyi vhezheni itsva.
Iyo nyowani Regedza Musarudzo vhezheni yeWOSOS 7.2 haiwedzere chero mashandiro matsva kune aripo. Rangarira kuti vhezheni 7.2 inowedzera basa reCardio Fitness yeApple Watch, uye Apple inodaro metroji yekurovedza muviri metric "chiratidzo chakasimba chehutano hwese". Hunhu hunoyera VO2 max, kana huwandu hwakawanda hweoxygen muviri wako unokwanisa kushandisa panguva yekurovedza muviri. Zviyero zvinotorwa nekufamba kwenguva, uye yako Apple Watch uye iPhone inogona kutumira zviziviso kukuzivisa iwe nezvekuchinja mune yako VO2 max. Cardio Fitness inogona kuwanikwa kuburikidza neyakajairwa tsika iyo yakawedzerwa kune Chiitiko app. Inogona kugadziridzwa muhutano Hutano pane iPhone. Cardio kusimba mazinga anowanikwa kune vashandisi vanopfuura makore makumi maviri, uye anofungidzirwa nezera.
Cardio Fitness ruzivo rwuchasiyana nezera uye murume, uye ichaiswa muchikamu chimwe chezvikamu zvina: yakakwira, pamusoro pevhareji, pazasi yepakati, kana pasi. Notifications dzinokuzivisa iwe kana hutano hwako hwepamoyo huri padanho rakaderera, zvichikupa kukurudzira kwekufamba zvakanyanya.
Kuti ugone kuisa iyi nyowani beta vhezheni yewatchOS 7.2, vagadziri vanofanirwa kurodha pasi yakakodzera yekumisikidza chimiro kubva kuApple Developer Center. Kana iyo mbiri yaiswa, watchOS 7.2 beta inogona kutorwa pasi kuburikidza neakavimbika Apple Watch app pane iyo iPhone. Kuti uite izvi, enda kuGeneral> Software kugadzirisa. Rangarira kuti kugadzirisa kune software nyowani, iyo Apple Watch inofanirwa kuve ne50 muzana hupenyu hwebhatiri, inofanirwa kuiswa pajaja uye inofanira kunge iri mukati meiyo iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa Regedza Mukwikwidzi vhezheni yeOSOS 7.2 kune vanogadzira
Google Assistant mutauri anowirirana zvizere neApple Music